Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Italia » Minisitry ny fizahantany: Andro tsara hanokafan'i Italia ny Andron'ny Repoblika
Ilaina ny manomana mialoha ny fanalefahana ny famerana COVID-19 hanomezana fotoana ny orinasa Italiana hiomanana
Mpivarotra, mpivarotra hotely, tompona bar no nanao fihetsiketsehana fanoherana tany amin'ny tanàna italianina maro
Fihetsiketsehana iray ivelan'ny trano ambany any Roma ny talata lasa nivadika ho ratsy tarehy
Ny faneriterena dia hamafana be amin'ny volana Mey, miaraka amina fetra sasany hatramin'ny 20 aprily
Nanambara ny minisitry ny fizahan-tany any Italia androany fa ilaina ny mandamina mialoha ny fanalefahana ny fetra COVID-19 hanomezana fotoana ny orinasa hiomanana, ary nilaza fa ny fetin'ny Repoblika amin'ny 2 jona dia daty mety ahafahan'ny firenena «misokatra» indray.
Mpivarotra, mpivarotra hotely, tompona fisotroana ary olon-kafa izay nakatona ny fandraharahana tao amin'ny tanàna italiana maro tamin'ity herinandro ity, anisan'izany ny fihetsiketsehana iray tany ivelan'ny trano ambany tao Roma ny talata lasa nivadika ho ratsy tarehy.
"Misy ny orinasa afaka misokatra manomboka iray andro ka hatramin'ny ampitso, toy ny mpanety," hoy ny minisitry ny fizahantany Massimo Garavaglia.
“Ny hafa, toy ny hotely lehibe, tsy afaka.
"Ilaina ny manara-maso ny angon-drakitra ary, mifototra amin'ny angon-drakitra, sokafy haingana araka izay tratra."
"Mila mikasa ny ho haingana isika raha tsy izany dia ho tratry ny hafa isika."
"Fetin'ny firenena ny 2 Jona ary mety io no datin'ny fanokafana indray."
Ny minisitry ny raharaham-paritra Mariastella Gelmini dia nilaza fa ho mora ny fanalefahana amin'ny volana Mey, ary mety hisy ny fetra manomboka amin'ny 20 aprily.